ဂျာမုန်းဒန်: My Favourite Make Up
Posted by ဂျာမုန်းဒန် at 1:51 PM
Skin food Prime Skin cream ကိုလိမ်းပြီးကိုယ်ကြိုက်တဲ့မိတ်ကပ်ကို ပြန်လိမ်းလို့၇လား
ဘာ brand လဲဟင် singapore မှာဝယ်လို့၇နိုင်ပါ့မလားမသိဘူးနော်
lancome က nightcream ကော၇ှိလား Nightcream ဆိုဘယ်ဟာကောင်းမလဲဆိုတာလေးပါဖြေပေးပါနော်
ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ. အွန်လိုင်းမှာဘယ်လိုပြန်ရောင်းသလဲဟင်. နားးမလည်လို့ရှင်းပြပါ။ ဘယ်လိုအပေးအယူလုပ်ကြသလဲ။
Ma ရေ..မရဲ့လင့်ထဲဝင်ကြည့်ဒါ မရဘူးဖြစ်နေတယ်.. ဒါကြောင့် ဂျာမုန်းအိမ်ထဲမှာပဲ ရေးလိုက်တယ်။
ှSkin food prime skin မှာ သူ့ရဲ့ brand .က.""Skin food""ပါပဲ။ ဂိုဂယ်လ်မှာ Skin food လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာရင်လည်းရတယ်။ Singapore မှာလဲရှိနိုင်မှာပါ။ ဂျာမုန်းကတော့ အွန်းလိုင်းကနေ ကိုးရီးယားကို တိုက်ရိုက်မှာယူတာပါ။
ူLancome မှာ nightcream ရှိတယ်။ အရမ်းတော့ဈေးကြီးတယ်။ Clinique, Shiseido လဲအ၇မ်းကောင်းတယ်။ ဂျာမုန်း Nightcream ကို Clinique သုံးတယ်။ သုံးကြည့်ပါလား... ။
အ၀တ်အစားဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားပစ္စည်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုမျိုး လေလံဆွဲရလည်းအမ။ ငွေချေတော့ရော ဘယ်လိုချေရလဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် reply လုပ်ပေးပါလား။
chit taeama yayama nae nyi ma online ka nay kyi pi countryamyo myo ka make upamyo myo ko buy khae dar tha di ya dae.
a ma nyi ma se mhar 11 PM kyaw mha harayan nout kya nay pi so pi hta pyan dar lay. nyi ma do. zay buy yin are lone ko forget thwar dar naw
အရမ်းလှတဲ့မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကိုလာရောက်လေ့လာသွားပါတယ်။ ရေမွေးအနံသင်းသ်ငးလေးတွေ သိချင်ပါတယ်။
လမ်းညွှန်အနေနဲ့တင်ပေးပါအု့းနော် :) ခင်မင်လျက်
အထူးသဖြင့် အလှအပနဲ့အချက်အပြုတ်လေးတွေကို အစ်မပိုပြီးကြိုက်တယ် ညီမလေးရယ်..
ညီမလေးတင်သမျှကို ချက်ချင်းဖတ်ချင်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ..
အစ်မရဲ့ mail ပါ..
အေ၇ ..သီရိမေးလ်က thirilay@gmail.com ပါ.. အမ product တွေ စိတ်ဝင်စားလို့ ဆက်သွယ်လို့ရမလား...